बंगलादेशकाे वेश्यालयकाे यि तस्विरहरू, जसले सबैलाइ हैरान बनाउछ……! फाेटाे फिचर – Tu Khabar Online
Home / जीवनशैली / बंगलादेशकाे वेश्यालयकाे यि तस्विरहरू, जसले सबैलाइ हैरान बनाउछ……! फाेटाे फिचर
admin2weeks ago	जीवनशैली Leaveacomment 200 Views
कांडपारा वेश्यालय बाहिर फालिएका कण्डम। ‘मैले वेश्यालयमा एक महिलालाई भेटे। त्यहाँ आउनुअघि उनी गार्मेन्टमा काम गर्थिन्। गार्मेन्टमा उनले एक महिलालाई भेटेकी थिइन, जसले आकर्षक जागिरको लोभ देखाइन्। त्यसपछि उनले आफ्नै इच्छामा वेश्यालयमा काम गर्न सुरु गरिन्। उनी वेश्यालय नछोड्ने बताउँछिन्। किनकि वेश्यालय पैसा कमाउनका लागि राम्रो ठाउँ भएको उनको बुझाई छ।’ रुँदै गरेकी २६ वर्षीया दीपा। उनी वेश्यालयमा ग्राहकबाट गर्भवती भएको दुई महिना भएको छ । पूर्बेली न्युजले तयार पारेको खबर साभार गरिएको हो ।
Previous १२ औं पटकको फलोअप रिपोर्टिङपछि समातिए श्याम परदेशी, पत्रकारको हातमा हत्कडी ? (भिडियो)
Next अमेरिकामा सवारी दुर्घटनाः एकै परिवारका ३ नेपालीको मृत्यु, २ घाइते